सर्वाेच्चका १४ प्रश्नमा केसीको जवाफ: अदालतको आदेशले माफियालाई प्रश्रय (दस्तावेजसहित) – Saurahaonline.com
सर्वाेच्चका १४ प्रश्नमा केसीको जवाफ: अदालतको आदेशले माफियालाई प्रश्रय (दस्तावेजसहित)
काठमाडौं, पौष २५ । डा गोविन्द केसीले स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा भएको सर्वाेच्च अदालतको आदेशले माफियाहरुले प्रश्रय पाएको बताएका छन्।
अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार सर्वाेच्चले सोधेका १४ प्रश्नको जवाफ दिँदै डा केसीले त्यस्ता फैसलाले सुधारको साटो विकृति आउने देखेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अनसन बसेको बताएका छन्।
‘यस अदालतबाट भएको आदेशमा निजी मेडिकल कलेजले प्रश्रय पाउने, गुणस्तरहीन स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन हुने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति आई तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्य र जिउधनप्रति खेलवाड भइरहेकाले त्यस्तो न्यायाधीश विरुद्ध लड्नु मेरो कर्तव्य हो,’ केसीको बयानमा उल्लेख छ, ‘मेरो भनाइ गलत निर्णय दिने न्यायाधीश विरुद्ध हो, न्यायालय विरुद्ध होइन।’
यस्ता छन् केही प्रश्न र जवाफ:
यस प्रतिवेदनमा पेश भएको समाचार सामग्री तथा प्रेस विज्ञप्ति देखाई सोधिन्छ, सो व्यहोरा तपाईंको हो होइन? तपाईंले भन्नुभएको कुरा आंशिक अमर्यादित र अदालतको अवहेलनाजनक हो भन्ने तपाईंलाई लाग्छ, लाग्दैन? बताइदिनुहोस्।
जवाफ: अनलाइन र सेतापाटी लगायतका खबरपत्रिकाको बारेमा म भन्न सक्दिनँ र प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७४/९/२४ मा मैले नै प्रेषित गरेको हो। यो विज्ञप्ति अदालतको अवहेलना हुनेगरी अशिष्ट र अमर्यादित तवरले प्रकाशित गरेको होइन, अदालतप्रति सम्मान छ। अदालतको अवहेलना गरेजस्तो मलाई लाग्दैन।
तपाईंले के कति आधार र कारणबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो?
जवाफ: श्री सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद पराजुलीले गर्नुभएका कतिपय निर्णय र कार्यहरुले न्यायको मानमर्दन भएकाले मैले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको हुँ।
तपाईंले सवाल ६ को जवाफमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले गर्नुभएका कतिपय निर्णय र कार्यहरु न्यायालयको मानमर्दन भएको भन्नुभयो, यसमा पुष्टि गर्ने आधार प्रमाणहरु केही छ? खुलाइदिनुहोस्।
जवाफ: यसमा मेरो भन्नुपर्दा प्रेस विज्ञप्तिमा (पाना ४) उल्लेख भएका मुद्दाहरु नै मेरा आधार र कारण प्रस्ट्याउन प्रयाप्त छन्, सो को अलावा पाना २ को मिति ०७४/९/२५ को दस्तावेजको विवरण पेश गरेको छु। त्यसले वास्तविकता प्रस्ट्याउनेछ। अनलाइनबाट प्राप्त २ प्रति नागरिकता समेतको प्रतिलिपि पेश गरेको छु, सोलाई आधार मानी पाऊँ। सो नागरिकता सम्माननीय प्रधानन्याधीशको हो।
अदालतले संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार न्याय सम्पादन गर्दछ भन्ने तपाईंलाई थाहा छ छैन? अदालतको आदेश फैसलाप्रति घृणा सिर्जना गर्ने अभिव्यक्तिले अदालतले अवहेलना हुने र सजाय समेत हुन्छ भन्ने तपाईंलाई थाहा छ छैन ? खुलाइदिनुहोला।
जवाफ: अदालतलको अवहेलनामा सजाय हुन्छ भन्ने विषयमा मलाई थाहा छ। सही न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशलाई म सम्मान गर्छु। अदालतको घृणा हुने अभिव्यक्ति मैले दिएको छैन।
तपाईंले आफ्नो प्रेस विज्ञप्तिमा भ्रष्ट र माफिया प्रधान न्यायाधीश भनी उल्लेख गर्नुभएको छ। यो अदालतप्रति घृणा सिर्जना गर्ने र अदालतको अवहेलना हुने खालको छैन र? हजुरको यस्ता शब्दले अदालतको सम्मान हुन्छ?
जवाफ: यसको जवाफको लागि आधार र कारणसहितको कागजात सवाल ७ मा पेश गरेको छु। त्यसैलाई आधार मानी पाऊँ। गलत निर्णय र कार्य गर्ने न्यायाधीशको बारेमा बोल्दा अदालतको अवहेलना होइन, सम्मान मिल्दछ।